Mogadishu Journal » Ciidamo kale oo ka soo gadooday aagagga dagaalka
Ciidamo kale oo ka soo gadooday aagagga dagaalka
Mjournal :-Qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada Baraawe ee gobolka Sh/hoose ayaa ku hanjabay inay isaga bixi doonaan magaaladaas haddii aan la siin mushaar iyo raashin ka maqan muddo afar bilood ah.
Ciidamadan oo watay gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa duleedka magaalada Baraawe waxa ay kula hadleen weriyaasha iyagoo sheegay in ay madaxda qaranka ka sugayaan jawaab deg-deg ah, muddo saddex maalmood gudahood ah haddii ay ka waayaana ay isaga baxayaan degmada Baraawe.
“Waxaan joognaa degmada Baraawe shan san iyo afar bilood,waxaana hadda naga maqan mushaar iyo raashin muddo afar bilood ah,qof baahana ma difaaci karo cadowga deyna waa naloo diiday maqaayadaha magaalada.”ayuu yiri mid kamid ah ciidamada xoogga dalka.
Ciidamadan ayaa sidoo kale sheegay inay haysato dhibaato u gaar ah oo ay ka mid yihiin in wixii saad ah loogu keeno badda.
“Mushaarkeenu waxa uu ahaa boqol dollar, askarina ka cabanayo ma jiro, balse labo askari oo waardiye isla galaya midna lacag ayaa u soo dhacayso midna waxba ma haysto,dowladu ha raadiso halka xaqeena uu jiro.”ayuu yiri askari ka mid ah ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada Baraawe.
Sidoo kale ciidamadan ayaa waxaa ay sheegeen inay ka xun yihiin in dowladu ay marwalba sheegto in raashin iyo mushaarba ciidamada la siiyo balse iyagu aysan afar bilood mushaar iyo raashinba arkin.
Hore ayaa ciidamo ku sugan deegaanka Dhanaane iyo qaar kamid ah degmooyinka Gobolka Sh/dhexe ay cabasho ka keeneen mushaar la’aan haysata,balse Dowlada Federalka ayaa ku adkeysanaysa inay bixiyaan mushaarka iyo raashinka ciidanka.
Kiisas Cusub ee Cudurka Ebola oo Laga Helay DRC
Qaar ka mida Waddooyinka Muqdisho oo maanta xiran